Taa bụ nnukwu ụbọchị Duo nke Google; na-amalite iwepụta ụwa ya | Akụkọ akụrụngwa
Duo, ngwa ọhụrụ nkata vidio Google, malitere itinye ya taa
Google gosiputara na I / O 2016 ngwa ohuru abuo nke gha abia na udu mmiri. Allo na Duo bụ nzọ ọhụrụ ya abụọ maka nkwurịta okwu n'etiti ndị mmadụ na ha dị iche na nke ahụ na-eduzi karịa ka ọ bụrụ ozi ederede, ebe nke ọzọ dị anya na vidiyo vidiyo.
Ọ bụ taa mgbe Duo ga-ahụ ọkụ, ngwa maka oku vidiyo nwere ụfọdụ nnọọ kemmasi akụkụ dị ka ike ịhụ "ndụ preview" nke na-akpọ mgbe oku na-aga na-na anyị ama. Mwepụta zuru ụwa ọnụ na-amalite taa, yabụ anyị ga-etinye ngwa Google ọhụrụ.
Ndị si Mountain View mara na ha nwere oghere dị omimi mgbe a bịara n'izi ozi ma ọ bụ ngwa nkwukọrịta. Hangouts na-eweta ụdị atụmatụ niile, mana ọ dabaala azụ ihe a tụrụ anya na ya, yabụ ugbu a Google ga-anwale -eme ka ala furu efu na ngwa abuo abuo na oru ufodu.
Duo bụ ngwa eji ezi echiche wee bụrụ a video nkata ahịa n'etiti abụọ ọrụ enweghị nsogbu ọ bụla na kpọmkwem na oku vidiyo. Kwekọrọ n'Ozizi na ma gam akporo ma iOS, mgbe ị na-akpọ oku, onye nnata ahụ ga-ahụ nhụchalụ nke vidiyo ahụ ozugbo tupu ha azaa. Akụkụ a akpọwo Google ka ọkụ aka ma nwee ike nkwarụ, ọ bụ ezie na ọ nwere ihe dị iche na ndị ọrụ iOS ga-enwerịrị ngwa ahụ.
Duo na-eji QUIC protocol na-enye ohere mma video mma na o nwekwara ikike ịchọpụta a adịghị mma na njikọ WiFi iji gbanwee gaa na data otu ma ọ bụrụ na achọrọ.
El nkenye amalite taaYa mere nọrọ na-ege ntị na Storelọ Ahịa Play izute Duo na ntụpọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Duo, ngwa ọhụrụ nkata vidio Google, malitere itinye ya taa
Zaghachi Dax Karr
Maximilian Vidal dijo
Zaghachi Maximiliano Vidal
Samsung na-egosi anyị na enweghị ike ịtinye S Pen azụ na Galaxy Note 7